Dharka Ragga, Jaakad jilicsan, Dharka Ragga - Hengqianxiang
Kooxaha iyo adeegyada
Dharka caadiga ah
Jaakad hoos ah
Raaxo, Waxqabad Sare, Cusbooneysiin
Ragga Jiilaalka Diiran ee Dharka Dharka Rasmiga ah ...
Shell 100% polyester Dahaarka 100% polyester Buuxinaya 90% hoos duck, 10% baal Cabbirka Cabir kasta oo la heli karo Midab Midab kasta waa la heli karaa Kale Real raccoon dhogorta Wax soo saarka Nimankan jaakada jilicsan ee jiilaalka waa mid aad u diiran. Naqshadeynta midabka ka soo horjeedka midabka ayaa ka dhigaya jaakadda mid da 'yar. Dufan weyn oo dabacsan ayaa haya dabaysha. Waxyaabaha soo-saarka ah ee Super diirran, nooca wanaagsan.
Ragga Dharka Dharka Dharka ah ee Dharka ...
Shell 100% polyester Dahaarka 100% polyester Buuxinaya 90% hoos duck, 10% Cabirka Cabbir kasta oo cabir ah waa la heli karaa Midab Midab kasta waa la heli karaa Hordhaca Wax soo saarka Dharka hoose ee hoose waa mid fudud, jilicsan oo diirran. naqshada dhogorta wan ee caanka ah. Alaabtu waxay leedahay miisaan fudud, raaxo leh, muuqaal leh.
Warshad soo saare Ragga Dharka Casual Xidho Sh ...
Shell 98% suuf, 2% polyester Dahaarka 100% polyester, Ku dayasho wananka wan dhogorta 100% Baaxadda polyester Cabbir kasta waa la heli karaa Midab Midab kasta waa la heli karaa Hordhaca Waxsoosaarka suuf tayo wanaagsan leh ayaa ka dhigaya jaakada mid heer sare ah. Jaakada waxay ku imaaneysaa jaritaan qurux badan oo jirkaaga sifiican ugu habboon, waxayna kaa dhigeysaa mid muuqaal leh oo qurux badan. 50% dhogorta ayaa kaa dhigeysa inaad diirimaad dareento xilliga jiilaalka ama deyrta. Waxyaabaha soo saarku waxay u muuqdaan kuwo casri ah, diirranaan leh, oo aan dabeyl lahayn, Miisaanka khaaska ah ee khaaska ah iyo waxyaabaha diiran.
Soo-saare Warshad Rasmi ah oo Koofiyad Ragga dhogorta gaaban ah
Shell 100% polyester Dahaarka 100% polyester Buuxinta 100% Cabbirka polyester Cabbir kasta waa la heli karaa Midab Midab kasta waa la heli karaa Hordhaca Wax soo saarka Dharka dhogorta oo tayo wanaagsan leh ayaa ka dhigaya jaakada mid heer sare ah. Jaakada waxay ku imaaneysaa jaritaan qurux badan oo jirkaaga sifiican ugu habboon, waxayna kaa dhigeysaa mid muuqaal leh oo qurux badan. 50% dhogorta ayaa kaa dhigeysa inaad diirimaad dareento xilliga jiilaalka ama deyrta. Sifooyinka alaabtu waa nooc wanaagsan, dabayl la'aan, diirran.
Ragga Dharka Rasmiga ah Xidho Jaakad Dabaysha Dheer
Shell 100% suuf Dahaarka 100% Cabbirka polyester Cabbir kastaa waa la heli karaa Midab Midab kastaa waa la heli karaa Hordhaca Wax soosaarka Naqshad laba-jibbaaran, qurxinta suunka. Nooc caato ah oo dhaadheer ayaa kaa dhigaya nimcooyin. Jaakada dhaadheer ee beige waa qaab caadi ah oo aan waqti lahayn. Sifooyinka alaabtu waa nooc wanaagsan, dabayl la'aan, diirran.
100% Polyester Windproof Custom Ragga Bam Gaaban ...
Shell 100% Polyamide Dahaarka 100% Cabbirka polyester Cabbir kasta waa la heli karaa Midab Midab kasta waa la heli karaa Hordhaca Wax soo saarkani wuxuu ku yimaadaa tuubooyin madow, wuxuuna ka tarjumayaa hal-abuurnimo iyo mowqifka casriga ah. Jeebka jeebka lagu rido ee gacanta ayaa si gaar ah loo dhigaa, wuxuuna ku daraa funk dharka kale ee fudud. Waxay ka samaysan tahay dhar tayo sare leh oo biyuhu xireen iyo dabaysha.Waxay u fiicantahay bannaanka iyo dharka caadiga ah. Wax soo saarku wuxuu ka kooban yahay Biyuhu iyo dabayl la'aan, dhaqso u qalalan.
Hot Hot Jiilaalka Haweenka Dhar Fashional Down C ...
Shell 100% polyamide Dahaarka 100% polyester Buuxinaya 90% hoos duck, 10% Cabbirka Cabir kasta cabir kasta waa la heli karaa Midab Midab kasta waa la heli karaa Qaar kale Hordhaca Wax soo saarka Jaakada dhalaalaysa ee loo yaqaan 'Down Jacket' ayaa si fiican loogu talagalay in lagula dagaallamo jiilaalka daran iyada oo aan culeys la saarin kuwa xiran. Jaakada waxaa lagu dhejiyay tiknoolajiyad qallalan oo qallalan oo leh caabbinta ugu fiican ee biyaha iyo iska caabinta ugu badan ee luminta kuleylka jirka. Waxyaabaha jaakada ayaa si raaxo leh loo kala bixin karaa oo loo xallin karaa kahor sahal ...
Jaakada dharka dibada Sport wome kartoo ...
Hordhaca alaabada Jaakada isboortiga ayaa ah mid aad ugu raaxeysan karo banaanka. Jiinyeerku sidoo kale waa mid aan biyuhu ka jirin Dhibaato kuma hayso roobka yar ee banaanka ka yimaada.Maryaha la neefsan karaa waxay u oggolaadaan dhididka inuu dhaqso u daato. Astaamaha alaabta 1. Waara oo raaxo leh. 2. Si raaxo leh loo kala bixin karo. 3. Culeys khafiif ah iyo waxyaabo diiran.4, Waxay ku wanaagsan tahay howlaha banaanka xilliga guga iyo deyrta. Haddii aad jeceshahay midabada, markaa jaakadani waa kugu habboon tahay. J ...
Qiimaha warshadda tartanka. Waxaan xakameynaa qayb kasta oo kharash ah si aan kuu siino qiimaha ugu fiican.
50-100PCS loo habeeyay
Waxaan soo saari karnaa amarro yaryar iyo amarro isku dhafan.
Ka dib markaad xaqiijiso muunadda iyo amarka, waxaan ku geyn karnaa badeecadaha 30 maalmood.
Adeeg qaabaynta qoto-dheer
Waxaan kaa caawin karnaa inaad ku horumariso qaababkaaga cusub iyadoo loo eegayo fikraddaada ama farshaxankaaga.
Daacadnimo, xilkasnimo, guul-guul
Sidee noqon doontaa xaaladda dharka iyo dharka ...
Ganacsiga dharka iyo dharka ee Shiinaha ayaa ahaa mid aan caadi ahayn qeybtii hore ee sanadkaan sababo la xiriira faafitaanka adduunka ee COVID-19.Baritaanka May iyo June, xogta qaar ayaa la qabtay. Xaaladda guud ee ...
Fiiri inbadan >>
Cashada shaqaalaha kahor 2020 Spring Festival, s ...
Dhamaadka sanadka 2019, waxaan soo koobi doonnaa shaqadii sanadkii la soo dhaafay, iyadoo si gaar ah culeyska loo saarayo dhibaatooyinka ka jira shaqada, qof walbana ha xusuusto inuu shaqo fiican qabtay sanadka cusub.
Muujinta Sixirka Bishii Febraayo 2020
Waxaan ka qeyb gali doonnaa MUUJINTA SIXIRKA Febraayo 2020, Kala soco wararkeena ugu dambeeya.
DADKA KA QEYBGALAYA
Tayada Koowaad, Macaamiil Ugu Horeeya
Cinwaanka:RM4A22, Dhismaha B, Xarunta Ganacsiga Caalamiga ee Ritan, Degmada Chaoyang, Beijing, Shiinaha 100020
Telefoonka gacanta: 0086-18515900837